Qarax Gaas Qasaare ka Dhacay Accra Casimada Dalka Ghana – Balcad.com Teyteyleey
MagladaAccra dalka Ghaban qarax xoogan uu sababay Gaas ayaa ka dhacay goob shidaalka lagu keeydiyo. qaraxan ayaa sababay qasaare aad aad iyo u weeyn waxaana uu dhaliye holac magaalada hareye. dabka ayaa sameyn xoogan u geeyste xaafadaha ka dhow goobta boyada shidaalka waday ku qaraxday.
kudhowaad 200 qofood ayaa ka baxsaday deeganka ku xeeran goobta shilka uu ka dhacay iyaga oo ka baqaya in dabka ku soo faafo. waxaa la sheegay in ay dhitneeyn 6 qofood tiro intaa kabadaa dhaawacayo kasoo garay dabka. qaar kamid ah dadka dhintay ayaa la maleeynayaa ineey weli ku dhexjiran meesha dabka qabsaday
ma ahan markii ugu horey dab uu qabsado casiamda Accra dalka Gana 2015 waxaa dhacay shilkan oo kale ay ku nafwayeen boqolaal qofood. ganacsiga gaaska iyo shidaalka ay ha mid dalka si weeyn looga isticmalo waxaana qaado booyodo isga daabulo xarumaha gaska iyo shidaalka lagu keeydiyo
The post Qarax Gaas Qasaare ka Dhacay Accra Casimada Dalka Ghana appeared first on Ilwareed Online.
FAALLO: MA SOOMAALIYA AYAA BRAZIL LA CAYAAREYSO! ARYAA BEENTA HA II SHEEGIN!!!